Juxa oo ku Dhawaaqay Inuu U Tartamayo Xilka Madaxweynaha Puntland 2019-ka[SAWIRRO] | SAHAN ONLINE
Juxa oo ku Dhawaaqay Inuu U Tartamayo Xilka Madaxweynaha Puntland 2019-ka[SAWIRRO]
GAROOWE– Cabdi Faarax Siciid Juxa ayaa xaflada ballaaran oo ka dhacay caasimadda Garoowe wuxuu si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu u taagan tartanka xilka madaxweynaha Puntland ee doorashadda 8 January 2018
Juxa oo hore u soo noqday Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha DFS Soomaaliya sidoo kalena muddo 5 sanno Wasiir ka ahaa waxbarashada Puntland ayaa Munaasabadii ololaha murashaxnimadiisa waxaa ka qaybgalay Qaar ka mid ah siyaasiyiiinta quudaraynaya madaxtinimada Puntland, aqoonyahano, Haween, dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Puntland ee caasimadda.
“Waxan isku sharraxay idinka waxaan u baahnahay gacantiina iyo taageeridiina, Waxaan u mahad naqayaa madaxwayne cabdiraxmaan Faroole oo fursad ii siiyay tijaabo siyaasadda oo ii magaacabay wasiirka waxbarashada Puntland. Sidoo kale waxaan mahad u celinayaa madaxwayne farmaajo oo fursad ii siiyay in xil kasoo qabto wasaaradda arrimaha gudaha Somaaliya”. ayuu yiri Cabdi Faarax Juxa
Wuxuu ka hadlay barnaamijkiisa siyaasadeed iyo waxyaabaha uu mudnaanta siin doono haddii loo doorto xilka madaxtinimadda Puntland, isagoo farta ku fiiqay wax ka qabshada arrimaha amniga. sidoo kale wuxuu ballanqaaday inuu kala saarin doono hay’adaha dowladda ee hadda isku xiran ee gollayaasha Garsoorka iyo Fulinta
“Haddii lay doorto waxaa kow u ah qorshahayga Amni dhammaystiran oo ay Puntland hesho. Waxaan dhisaya amniga Puntland anoo u maray cidda shaqadeeda aqoonta u leh. Waxaan awood saarayaa koboca dhaqaale. Waxaan ka baaran dagayaa oo dul istaagay sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha Puntland oo leh gacan ammaan ah, Waxaan kala saari doona hay’adaha dawladda sare sida garsoorka fulinta iyo sharci dajinta.. Waxaan idinku matali doona taariikhdiinna himiladiina tabashadiina maqaamkina iyo miisaankiina” ayuu yiri Juxa.
Khudbadiisa mudane Juxa wuxuu ku soo hadal qaaday dhibaatadda ka taagan gobolka Sool, isagoo ku eedeeyay madaxweynaha Somaliland ruuxa masuulka ka ah dhibaatadda ka taagaan gobolka Sool
“Dadka reer Puntland iyo Somaliland waa dad nabad ku nool o ka shaqeeyay horumarkooda kana tilmaaman Soomaaliya. Madaxwayne Muuse oo ah nin ciidan ah garanayana dhibaatada colaada waxaan leeyahay si nabad ah uga bax gobollada Sool iyo Sanaag. Arrintan waxaa go’aankeeda iska leh dadka reer Sanaag iyo Puntland. Muuse biixi oo go’aanka nabadda iyo colaadda gobolladaas gacanta ku haya waxa ku codsanayaa inu nabad uga baxo gobolladaas.”
Gabagabadii, Murashax Juxa wuxuu ku eedeeyay Dowladda Federaalka Soomaaliya inay burburinayso nidaamka federaalka, isagoo uga digay inay faragalin ku samayso doorashadda Puntland ee lagu wado inay dhacdo 2019ka.
“Federalku wuxuu ku samaysmay dadaal ay Puntland dawr wayn ku lahayd. Dhismahiisuna waa mid socda waxase muuqata dheelli. Dheelligaas oo ah awoodda garsoorka fulinta iyo kii sharci dajinta oo isku qasan. Taas oo khatar ku ah inay dhacdo dood loo siman yahay o ku dhacda talo wadaag. Sidoo kale maamul gobolleedada waxaa ka jro faragalinno ay u baahan tahay in wadaddeeda sharciga ah loo maro. Arrimaha dibadda oo u astaysan dawladda federaalka waxaa ka muuqda qarda jeex oo ay ugu dambaysay khilaafka Canada iyo Saudi Arabia. Labada dal oo mid walba xiriir nagala dhaxeeyo. Eretrtia iyo jabuuti sidoo kale Qatar iyo Imaraadka . Waxaa la yaabka ah in dawladda federaalka ah ay mar walba dhex gasho kiis walba o dawladaha adduunka ka dhex dhaca” sidaas waxaa yiri Murashax Juxa
Doorashada barlamaanka iyo madaxtinimadda Puntland ayaa haatan waxaa ka dhiman muddo 4 bilood ah, iyadoo lagu wado in murashixiin kale ay ku dhawaaqaan inay u tartamayaan jagadda u saraysa Puntland.